Sina namboarina tamin'ny kodiarana vy vita tamin'ny vy tamin'ny alàlan'ny fanodinana milina mazava tsara sy orinasa | Hanvos
Maninona ianao no mila foroka
Kodiarana fa tsy kodiarana kora?
Ny kodiarana sandoka dia kely porous kokoa noho ny kodiarana manipy noho ny fizotra. Ny fizotry ny fisandohana dia mahatonga ireo kodiarana matanjaka kokoa, mateza kokoa ary mahatohitra kokoa ny harafesina sy ny fitrandrahana oksidana. Ankoatr'izay, ny fahamendrehan'ny kodiarana dia tsy voarohirohy. Ny kodiarana sandoka dia mazàna manana fahombiazan'ny fiara lehibe kokoa ary manatsara ny fahombiazan'ny solika.
Ny kodiarana sandoka maivana dia manome tombony maromaro raha ampitahaina amin'ny alàlan'ny alikaola. Anisan'izany ny: Fahombiazan'ny solika tsara kokoa (hatramin'ny iray hetsy isan-jato isan-jato); Fihenan'ny emissions CO2; fiarovana azo antoka; Fiainana lava kokoa ho an'ireo singa fampiatoana sy frein; Tsy lazaina intsony ny dia mitaingina kokoa.
Ny kodiarana sandoka dia eo ho eo amin'ny 20 isan-jato no maivana kokoa noho ny alloys cast, ary maivana kokoa noho ny kodiarana vy ny lanjany, miaraka amina toetran'ny rivotra tsy azo oharina avo kokoa.
Ny kodiarana vita amin'ny jiro maivana dia misongadina ho sokajy misolo tena ny vokatra otrikaina tsara indrindra ao an-dakilasy. Ireo dia ampiasain'ny matihanina amin'ny laharana fifaninanana môtô fifaninanana avo lenta. Izy ireo koa dia nofinidin'ny mpankafy fiara manerantany noho ny fihenan'ny lanjany sy ny tombontsoa lehibe hafa.
Ny kodiarana vokarin'ny teknolojia fanaovana hosoka tena endriny dia matanjaka indrindra, mateza ary, noho izany, azo antoka noho ny haben'ny fihenan'ny metaly (comprstinb) sy ny lesy efsvricolfasting effsvricolfasting, toy ny lavaka sy triatra. Tanteraka amin'ny alàlan'ny fibre mifanaraka tsara izany
firafitry ny firafitry ny aerospace amin'ny alàlan'ny telo. dimensional mihidy-maty
fizotran'ny fanodinana mafana amin'ny tsindry famoahana herinaratra 10 000-15.000 taonina ary miaraka amina fitsaboana hafanana manokana. Raha iharan'ny fiatraikany tampoka dia tsy vaky ny kodiarana sandoka ary azo amboarina raha ilaina izany.
Ankoatra ny fahazavana fahatelo noho ny aluminium, ny kodiarana sandoka dia manana sanda hafanan'ny hafanana manokana; Avo 23 heny noho ny vy. Noho izany, ny toetra mampiavaka ny intrinsika dia miantoka ny fanaparitahana ny hafanana haingana kokoa avy amin'ny kodiarana sy ny rafitra fanamainana, amin'izay dia manalava ny freins and pad pads. Ankoatr'izay, izy ireo dia misolo tena singa fiarovana lehibe. Ny kodiarana sandoka koa dia manana fantsom-pihenan-dàlana avo lenta kokoa izay manome ny fihoaram-pefy hovitrovitra, fikorontanana, fiantraikany ary tabataba
vokatr'izany dia mitaingina aina kokoa ho an'ny mpamily sy ny mpandeha ary mitahiry ny rafitra fampiatoana asa lava kokoa.
Teo aloha: Kodiarana sandoka / kodiarana sandoka
Manaraka: Customization Wheels Car 16-22 Inch Rims Car Forged Alloy Wheel ho an'ny Fiara